"Theihding Zaksakna” (သတိပေးအကြောင်းကြားခြင်း) - THIT HTOO LWIN (Daily News)
Home / Myanmar News / "Theihding Zaksakna” (သတိပေးအကြောင်းကြားခြင်း)
"Theihding Zaksakna” (သတိပေးအကြောင်းကြားခြင်း)
20:08 Myanmar News
Letter No. - 20211106
Ukna buluh Galkap te tung panin mimal sumbawlna dingin Tenderasiau pawlkhat om cih kiza hi.
မတရားသဖြင့် အာဏာလုယူထားသော စစ်ကောင်စီမှ ခေါ်ယူသည့် တင်ဒါများကို မိမိတို့အကျိုးစီးပွား တစ်ခု ကိုသာကြည့်ပြီး လျှောက်ထားသူများ ရှိနေသည်ကို သိရှိထားပါသည်။
Hih bang Ukna buluh galkapte thuvaihawmna nuai ah nasepna, gamtatna in, Galkap Ukna kumtampiakip zawh nading lampi tuamtuam tawh panpihna ahi hi.
ဤသို့ စစ်ကောင်စီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် အလုပ် လုပ်ခြင်းသည် အာဏာရှင်များ၏ အစိုးရယန္တရား သက်ဆိုးရှည်အောင် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ကူညီနေခြင်းသာဖြစ်သည်။
Hih bang in Ukna buluh te tawh nasepkhopna in Zogam leh Zomi te aa ding, khangsawn tuailai momnote mailam ding lainatna leh khualna tawh;
ဤသို့ အာဏာလုစစ်ကောင်စီ အလိုကျ ပူးပေါင်းခြင်းသည် မိမိတို့ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုး၊ မျိုးဆက်သစ်များစွာ ၏ အနာဂတ်ကိုရှေးရှုကာ -
§angah hak mahmah Kumpi Zum nasepna, panmun, za te leh khasum te nusia in akipiakhia CDM lut, Mipi' Zum Nasemte,
ရခဲလှသော အစိုးရအလုပ်၊ ရာထူးနေရာနှင့် လစာများစွန့်လွှတ်ကာ ပြည်သူနှင့်အတူ ရပ်တည်ကြ သော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ
§ mawhna nei het lo napi, migilo ngongtat galkapte ii mat leh hen, bawlsiatna, thuak a, tulai tak mahmah in haksatna namkim sung ahanungta lai Zomi pihte,
အပြစ်တစုံတရာမရှိဘဲ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ မတရား ဖမ်းဆီး၊ နှိပ်စက်၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရ သည့် သူရဲကောင်းများ၊ ဒုက္ခပေါင်းစုံ ခါးစည်းခံကာ ပေးဆပ်နေကြသည့် သွေးချင်းများ
§ cik mah inakingah kik nawn lo ding nuntakna te sisan bua, luangkham aa kipiakhia khin phamsa galhang Zomi momnote kipiakkhiatna te thupisim lohna, mawksuahsakna leh mipite lunggulhna te langpanna ahi hi.
ဘယ်တော့မှ အစားပြန်မရနိုင်တော့သည့် အသက်ကိုပေးကာ သွေးမြေကျခဲ့ရသော သူရဲကောင်းများ၊ လက်ရှိတွင် အသက်ကိုရင်းလျှက် တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် ပေးဆပ်နေကြသူများနှင့် ပြည်သူ တရပ်လုံး၏ မျှော်လင့်တောင့်တချက်များကို မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
Tua ahih manin Tenderasiaute le laak ding asawm te in tu mahmah in khatvei na ngaihsun pha kik un cih People’s Defence force - Zoland (PDF Zoland) pan kong thei sak uhhi.
သို့ဖြစ်၍ အာဏာလု စစ်ကောင်စီမှခေါ်ယူသည့် တင်ဒါများအား လျှောက်ထားခြင်း မပြုကြရန်နှင့် လျှောက်ထားသူများရှိပါက ရပ်တန်းကရပ်ကြရန် ပြည်သူများ၏ People’s Defence Force – Zoland (PDF Zoland) မှ သတိပေးလိုက်သည်။
Theihsakna kitheih mawh bawlin Ukna buluh Galkap te khutnuai pan mimal hamphatna ciang azong company te in na company le nasep na mabante ah vaibuai nawngkai khat peuh hong tun khak leh Mipi makaih PDF Zoland pan vaipuak lakna omlo ding hi cih hong thei sak ung.
သတိပေးခြင်းကို လျစ်လျူရှုကာ အာဏာလုစစ်ကောင်စီ၏ လက်အောက်တွင် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာသော ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ကုမ္ပဏီနှင့် လုပ်ငန်းများအပေါ် ထိခိုက်မှုတစုံတရာ ပေါ်ပေါက်လာပါက ပြည်သူ့ဘက်တော်သား PDF Zoland မှ တာဝန်ယူလိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးလိုက်သည်။
People’s Defence Force – Zoland
ZOMI FEDERAL UNION
"Theihding Zaksakna” (သတိပေးအကြောင်းကြားခြင်း) Reviewed by THITHTOOLWIN on 20:08 Rating: 5